Ilay Trondro Mpanamboatra Fasika
Mifohaza! | Jona 2015
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Bichlamar Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kroaty Lingala Litoanianina Luvale Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Myama Norvezianina Poloney Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tahisianina Tailandey Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tok Pisin Tseky Tsonga Twi Vietnamianina Xhosa Zoloa Éwé
EFA noeritreretinao ve hoe ahoana no nampisy ny fasika? Ho gaga angamba ianao raha ilazana hoe misy trondro mahay manamboatra azy ireny. Tsy inona izany fa ilay trondro atao hoe kongotry. Mikepokepoka haran-dranomasina izy io, dia iny no lasa fasika madinika kely.
Atỳ amin’ny ranomasin’ny tany mafana no tena ahitana ny kongotry. Matanjaka be ny valanoranony sy ny nifiny, ka mahavita mitsakotsako haran-dranomasina. Ireo ahidrano ihany no tazonin’ny vatany, fa ilay haran-dranomasina efa lasa fasika kosa avoakany. Mahatratra 20 taona ny kongotry sasany vao maty, nefa tsy simba mihitsy ny nifiny.
Mahery mihinana haran-dranomasina efa maty ny kongotry any amin’ny toerana sasany, ka betsaka noho ny an’ny biby hafa ny fasika vitany. Milaza ny manam-pahaizana fa misy kongotry mahavita fasika 100 kilao eo ho eo, isan-taona.
Manao asa hafa tena ilaina koa ny kongotry. Manadio ny haran-dranomasina koa mantsy izy ireo rehefa mihinana ahidrano. Hoy ny boky Zavamananaina eny Amin’ny Haran-dranomasina (anglisy): “Misy milaza fa tsy ho toy izao hitantsika izao ny haran-dranomasina raha tsy teo ireo trondro mpihinana zavamaniry.” Mora tototry ny ahidrano mantsy ny haran-dranomasina.
Miasa be ny kongotry mandritra ny andro, ka mila miala sasatra rehefa alina. Tsy maintsy eny amin’ny harambato izy no misitrika, satria betsaka ny biby mpihinana azy. Tsy maharo azy anefa izany, rehefa sendra antsantsa tena noana izy.
Mbola mahita fomba hafa hiarovan-tena koa ny kongotry rehefa alina, ary tena mahavariana ilay izy. Mamoaka dity tsy misy lokony izy mba handrakofana ny vatany. Milaza ny mpandinika ny zavaboary any an-dranomasina fa afaka miaro azy amin’ny biby mpiremby io dity io satria maimbo be.
Anisan’ny trondro mora tazana sy manaitra ny maso ny kongotry. Mareva-doko izy io na lahy na vavy, ary maromaro ny loko eo aminy. Miovaova izany rehefa mihalehibe izy. Fa ny tena mahafinaritra dia ilay izy tsy matahotra olona rehefa any amin’ny toerana tsy be mpanjono.
Tsy hohadinoin’ny mpikaroka mihitsy ny hoe nahita kongotry sy ny nandre azy ireo nitsamontsamona haran-dranomasina. Hoatran’ny hoe mampidera ny lokony fotsiny ny kongotry rehefa mivezivezy etsy sy eroa. Manasoa ny haran-dranomasina koa anefa izy amin’ireny, mba ho afaka hankafy an’izany ny olona sy ny zavaboary hafa.
Misy karazany 80 eo ho eo ny trondro kongotry fahita eny amin’ny haran-dranomasina. Antsoin’ny olona hoe trondro boloky koa izy io, satria hoatran’ny vavam-boloky ny vavany. Mahatratra 50 ka hatramin’ny 100 santimetatra ny halavan’ny kongotry.
Hizara Hizara Ilay Trondro Mpanamboatra Fasika
MATOAN-DAHATSORATRA Fomba Dimy Hanatsara ny Fahasalamanao
HO AN’NY FIANAKAVIANA Hajao Foana ny Voadim-panambadianao
FIANARANA AVY TAMIN’NY LASA Galilée
FANTARO IZAY LAZAIN’NY BAIBOLY Fanitsakitsaham-bady
TOPY MASO ERAN-TANY Maresaka Momba ny Tontolo Iainana
Soratra Fandikana boky MIFOHAZA! Soso-kevitra 5 Hanatsara ny Fahasalamanao
Hizara Hizara MIFOHAZA! Soso-kevitra 5 Hanatsara ny Fahasalamanao
Soso-kevitra 5 Hanatsara ny Fahasalamanao
MIFOHAZA! Soso-kevitra 5 Hanatsara ny Fahasalamanao